Adeegga maskax leh oo degdeg ah-iibka ka dib waxay bixisaa taageero iyo damaanad in gargaarkaaga.
◇ dir farsamo si ay u fuliyaan rakibaadda iyo debugging qalabka loogu talagalay dadka isticmaala shisheeye la magdhow. Dalalka ama gobollada xaaladda siyaasadeed deganayn ama in ay u egtay of SOFHURA kuma jiraan qorshaha. .
◇ tabobaro isticmaala si amrayo qalabka iyo iyaga u hoggaamin wax soo saarka ammaan ah.
◇ Sharax dayactirka joogtada ah ee qalabka si taxadar leh oo ka saar unu caadi ah.
◇ Waxaan mas'uul ka nahay dayactirka oo dhan in ay keento dhibaato tayada dhex damaanad hal sano. Accessories Dibadda guud ahaan dhiibay oogeen in orde si ay u bixiyaan adeegga macaamiisha ajnabiga ah si dhakhso ah.
Delle The macaamiisha shisheeye qabto wax su'aalo ah oo ku saabsan adeeg-ka dib iibka toos email in boostada our loo qoondeeyey soo diri kartaa. Waxaan u jawaabi doonaa su'aalo aad ee 12 saacadood iyo xalinta dhibaatooyinka kala duwan ee macaamiisha ee waqtiga.
◇ Waayo, gobollada qaar ka mid ah kuwaas oo fiisooyin ay adag tahay ka heli, macaamiisha farsamo ay soo diri kartaa shirkadda our si ay u helaan hanuun iyo tababar lacag la'aan ah.
◇ aqbal talooyin ah ee horumar u hormarsataan by macaamiisha ah jid u filanayo. Iyadoo la tixraacayo iskujoog oo suuqa, bixiyaan alaabta iyo adeegyada si ay u daboolaan baahida dadka isticmaala 'iyo in la abuuro qiyam iyaga u.
Delle macaamiisha The kuwaas oo waxyaabaha ku passsed taariikhda damaanad ay xaq u leedahay inay ku raaxaystaan our adeeg ka dib-iibka ee nolosha.
Haddii Aad Leedahay Shuruudaha kasta
Fadlan nala soo xiriir wakhtiga
khadka adeegga iibka Ka dib-: + 86-595-22356770 ama iibka-ka dib markii adeeg E-mail loogu talagalay macaamiisha ajnabiga ah: aftersales@qunfeng.com ama aftersale01@qunfeng.com
Waxaan ka dhigi doonaa dadaal kasta si ay u xaliyaan dhibaatooyinka. Your guul ammaanta cusub dari doonaa noo!
Waad ku mahadsan tahay iskaashiga aad daacad ah!